संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनः काँग्रेसको निम्छरो प्रश्नलाई यस्ता जवाफ – Maitri News
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनः काँग्रेसको निम्छरो प्रश्नलाई यस्ता जवाफ
Mohan Bastola May 8, 2019
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम केहि स्पष्ट विषय अभिभारा र उद्धेश्यमा केन्द्रित भएर आएको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका सहभागि हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन र समृद्धिलाई स्पष्ट समेटेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई व्यापक र पूर्णरुपमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र न्याय, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता कुरालाई पनि समेटेको बताउनुभयो । उहाँले एक वर्षको नीति कार्यक्रम भए पनि दूरगामी कार्यक्रम राखेर ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो । सरकार एउटा निरन्तरताको विषय हो भन्ने कुरालाई ख्याल गरेरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै जागै हुँदादेखिने सपना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले देश बनाउने सपना बोकेको पनि दाबी गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिको सम्मान बढाउने,उनीहरुलाई मजबुद बनाउने खालको आएको पनि उहाँको भनाई थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको केहि अन्यौलता देखिएको भन्दै संशोधन प्रस्तावमा पनि खासै सुधार गर्नुपर्ने कुरा नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचना गर्ने ठाउँ नदेखेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले मेरो सरकार भनेको विषयलाई लिएर आलोचना भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मेरो सरकार भन्ने कुरा दुनियाँको चलन भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी दलले पनि हचुवाको भरमा आलोचना गरेको भन्दै सो दललाई आफ्ना अभिव्यक्ति सच्याउन सुझाव समेत दिनुभयो ।
धानमन्त्रीले अहिलेकै सरकारले हडपिएका सार्वजनिक जमिनलाई सरकार मातहत ल्याएको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, “बालुवाटार अहिलेको सरकार बनेर मासेको हो र ? अहिलेको सरकारले खुलामञ्च कब्जा गरेको हो र ? बरु अहिलेको सरकारले ल्याएको हो । अहिले त छानबिन हुँदैछ, खोजी हुँदैछ, अहिले हो वाइडबडी घोटाला भएको, पहिले भएकाहरुको छानबिन हुँदैछ ।”
प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले नै सुन तस्करीको अन्त्य गरेको बताउनुभयो । “कतिपय माननीयहरुले सुन तस्करी के भयो भन्नुभयो । बन्द भयो । उनीहरु जेलमा छन् । प्वाल बन्द गरियो । ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको रहेछ । त्यो सुन कहाँ गयो । पहिलेको सरकारले थाहा पाउला । अहिलेको सरकार आएपछि रोकियो ।”
प्रधानमन्त्रीले ०४८ मा शिक्षक र कर्मचारीलाई यसरी पूर्वाग्रहपूर्णरुपमा लखेटिएको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘त्यसको विरोध गर्‍यौं अब यस्ता अभ्यासहरु हुँदैनन् ।” गत वर्षबाट नीति कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गर्ने परम्परा बसेको बताउँदै यस झन् परिमार्जित आएकोले सर्वसम्मत पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले अपिल गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २६ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिंदै त्यसबाट पर्यटन र विविध पक्षमा फाइदा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
निम्छरो असंसदीय शब्द होइन
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा पनि सम्बोधन गर्दै माननीयहरुलाई लोकतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “माइतिघर मण्डलामा दुबो माड्न पाइएन भने लोकतन्त्र सकियो भन्न मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले तानाशाहीको हल्ला फैलाएर जनतामा नफैलाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरु राजा चाहियो भनेको देख्छु, कसैले एकदलिय भनेको सुन्छु, कुनैतर्फको तानाशाहीतर्फ जान सकिँदैन । लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पित गरेको छु । जुन चिजका लागि लडेर ल्याएका छौं ।”
प्रतिनिधिसभामा निम्छरो शब्द प्रयोग गरेकोमा सांसदले राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरण थियो, “निम्छरो असंसदीय शब्द होइन ।”
Previous Previous post: समृद्धिको यात्रा सार्थक तुल्याउन पत्रकारिता कटिबद्ध बन्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड, आठ जना सम्मानित
Next Next post: नीति कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षलाई प्रचण्डको आग्रह